▷ Ha ku lumin wakhtiga dib-u-cusboonaynta Shaagagga Software-ka - 【Comparison】 2022
Ha ku lumin wakhtiga dib u cusboonaysiinta giraangiraha software-ka
Pattex No More ciddiyo Asalka, koollada kor u adkaysta, xabag dheeraad ah oo alwaax ah,...
Waxaan la hadlayay saaxiib hore oo ka tagaya saxaafadda teknoolojiyadda oo bilaabaya tignoolajiyada. Hadduu isagu! Markaa waxaan waydiiyay waxa uu marka hore halkaas ka samayn doono.
"Samee nidaamka maareynta maadada gaarka ah (CMS)," ayuu ii sheegay.
Markaa waxa aan si cad u caddeeyey su’aashii ugu horraysay ee maskaxdayda ku soo dhacday: “Sabab! "
Waxaan ula jeedaa si dhab ah, imisa CMS ayaa jira? Marka loo eego xisaabintayda, waxaa jira in ka badan 100. Waxaa jira dhammaan noocyada: il furan, lahaansho iyo software adeeg ahaan (SaaS). Kuwanuna waa kuwa keliya ee ay dadweynuhu heli karaan. Haddii aad tiriso kuwa la sameeyay, waxay u badan tahay inay jiraan ugu yaraan tiro isku mid ah.
Tani waa waalan Ma jirto sabab dhulka dusheeda qof kasta ugu abuurayo CMS kale meel eber ah. Dabcan, mararka qaarkood waxaa jira isbeddel dhab ah, sida kor u kaca CMS madax la'aan, sida Strapi.
Kahor intaadan waydiin, CMS-ga aan madaxa lahayni kuma iman mawduucyo horudhac shabakadeed oo horay loo dhisay ama aaladaha lagu abuuro. Taa beddelkeeda, si ka duwan CMS-ga caadiga ah, ma daneeyaan dhammaadka- hore ee degelkaaga. Taa baddalkeeda, waxay diiradda saaraan kaydinta nuxurka ugu muhiimsan, taas oo loo isticmaalo in lagu kaydiyo oo lagu bixiyo macluumaad habaysan. Macluumaadkan ayaa markaa diyaar u ah in lagu daawado API RESTful, badiyaa la isticmaalo JSON ama XML.
Ma fahmay? Wacan.
Hadda waxaa laga yaabaa in shirkadaha qaarkood ay Strapi u isticmaali karaan si wanaagsan. (Waa inaan sheego inay jiraan kuwo kale oo badan, oo ay ku jiraan Ruuxa, Contentful, iyo Prismic.) Markaa uma baahnid inaad abuurto CMS adiga kuu gaar ah oo aan madax lahayn. Runtii, inteena badan, CMS-yada duugoobay, sida WordPress, Joomla! iyo Drupal, si fiican ayay u shaqeeyaan. Waxaan ula jeedaa, heck, WordPress wuxuu maamulaa 34% dhammaan mareegaha adduunka.
Si kale haddii loo dhigo, haddii aad dhisayso ama dayactirayso CMS gurigaaga, waxaad luminaysaa wakhti iyo lacag qiimo leh.
Ma aha oo kaliya CMS, dabcan. Waxaa jira tusaaleyaal badan. Waxaan arkay toosanno guri oo aad u xun oo loogu talagalay hantida ma-guurtada ah, bangiyada yaryar, iyo tafaariiqda inta aan waligay doonayay inaan arko. Waxaan ula jeedaa, waxaan u maleynayaa in barnaamijka hantida maguurtada ah ee caadiga ah ee aan ku arkay 1000 Amiga 1985 uu ahaa mid weyn. Laakiin aan wajahno: ha dhawaato ama ha dheeraato muuqaalkan 36-jirka ah wuu dhiman doonaa.
Hadda haddii shirkaddaadu ay horumarinayso software toos ah, adiga ayaa kuu fiican. Sii wad Waxa kale oo had iyo jeer jiri doona meel loogu talagalay Dib-u-iibiyeyaasha Qiimaha ku daray (VARs) ama qalabeeyayaasha software. Laakiin haddii meheraddaadu ay ereyo iyo muuqaalo dadka hor dhigto, maamusho guryaha, ama iibiso waxyaalo yaab leh, uma baahnid inaad sidoo kale noqoto horumariye software.
Ganacsade Marc Andreessen ayaa ku saxsanaa markii uu sharaxay sababta Software-ku u cunayo Adduunka in shirkadaha waaweyni ay u baahan yihiin inay noqdaan shirkado software. Laakin anigu qoraal uma qorayo madaxda shirkadda Fortune 500, waxaan u qorayaa mulkiilayaasha ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah. Ma shaqaaleysiin doontid daraasiin borogaraamayaal ah si ay u dhammaystiraan software-kaaga ganacsiga. Xitaa haddii aad haysato, uma badna inaad awood u yeelan doonto inaad horumariso natiijooyinkaaga adigoo horumarinaya barnaamijyadaada.
Taa baddalkeeda, waa inaad baartaa barnaamijyada ugu fiican ee ku habboon baahiyahaaga. Haddii aadan tan sameyn karin, la xiriir iibiyeyaasha qiimaha lagu daray, nidaamka dhexgalka, ama bixiyeyaasha adeegga la maareeyay (MSPs). Helitaanka qalabka iyo barnaamijyada saxda ah, iyo ka dhigista inay adiga kuu shaqeeyaan, waa shaqadaada ee maaha adiga.
Ha u malayn in aan la hadlayo oo keliya kuwa idinka mid ah oo aan ku jirin warshadaha tignoolajiyada. Shirkadaha tignoolajiyadu waxay sameeyaan khaladaad isku mid ah.
Tusaale ahaan, waxaa jira boqolaal qaybinta Linux. Kuwan, in aan ka badnayn toban ka mid ah waa kuwo ganacsi ahaan shaqayn kara. Waxaan ula jeedaa, haddii aad rabto inaad dhisto Linux kuu gaar ah, u tag. Waa qosol (Xaqiiqdii, aniga qudhaydu waan sameeyay). Qaar naga mid ah, waxay u tahay madadaalo. Laakiin waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya abuurista softiweerka madadaalada iyo dhisidda ganacsi macquul ah.
Kaliya la imaanshaha dabinka jiirka ka wanaagsan waa wax aad u fiican, laakiin haddii aadan suuq geyn karin, rari karin, ilaalin karin, oo iibin karin dabinka jiirka, ma lihid ganacsi. Xitaa ma lihid qorshe ganacsi. Waxaad u baahan tahay fikrad weyn, fulinta, iyo dhammaan waxyaabaha kale ee aan sheegay.
Markaa mar labaad, iyo farxad, ilaali khibradaada oo u ogolow xirfadlayaasha software-ka runta ah inay kaa caawiyaan ganacsigaaga. Way sii faraxsanaan doonaan, waad faraxsanaan doontaa, haa haa, waxaad u badan tahay inaad sidoo kale faa'iido yeelan doonto.
Xuquuqda daabacaadda © 2021 IDG Communications, Inc.
Hello Microsoft! Ma jiraa qof dhegaysanaya?
Waxa Gen Z iyo Millennials ay ka rabaan loo shaqeeyayaasha
Tusaha lagama maarmaanka ah si aad u soo gasho iCloud
Qaar ka mid ah shirkadaha tignoolajiyada waxay garaaceen badhanka hakadka markii ay shaqaaleysanayaan
Kalsoonida macaamiishu waxay ka bilaabataa daryeelka dhibaatada macmiilka